प्रेम गीत ३’ मा अञ्जली अधिकारीको सम्भावना बढी छ | latestnepali.com
प्रेम गीत ३’ मा अञ्जली अधिकारीको सम्भावना बढी छ
यस वर्ष खासै धेरै सिनेमा बनिरहेका छैनन् । निर्माणका क्रममा रहेका केही सिनेमाले भने दर्शकलाई उत्साहित बनाएका छन् । व्यावसायिक रुपमा सफल सिनेमा ‘प्रेम गीत’ र ‘प्रेम गीत २’ पछि निर्माण टिम यसको तेस्रो भाग पनि निर्माण गर्ने तयारीमा लागिरहेको छ ।
फिल्ममा शीर्ष भूमिकामा त प्रदीप खड्का नै हुनेछन् । तर, तेस्रो भागमा नयाँ नायिकाको खोजी भइरहेको छ । ‘प्रेम गीत ३’ मा गीतको भूमिका निभाउन २५ युवतीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यसैबीच फिल्मका निर्माता तथा निर्देशक सन्तोष सेनसँग खबरहबले कुराकानी गरेको छ:
‘प्रेमगीत ३’ का लागि ‘गीत’को अडिसन कस्तो रह्यो ?
भर्खरै हामीले प्राथमिकतामा परेका २५ जनासँग अडिसन लियौँ । अडिसन निकै उत्साहित र सफल भयो । सहभागी सबै गीतहरुले उत्कृष्ट प्रस्तुति दिनुभयो । गीतको क्यारेक्टर बन्न खोज्नुभयो । हामी अब रिजल्टको पर्खाइमा छौँ । ती प्रतियोगीको भिडियो हेरेर हामीले कसलाई गीत बनाउने भन्ने निर्णय गर्नेछौँ ।
छानिएका २५ जनामा सबै गीतका लागि फिट थिए ?
हामीले छानेकामध्ये २० जनाले चाहिँ उत्कृष्ट प्रस्तुति दिनुभयो । उहाँहरु सबै गीत पात्रका लागि दाबेदार हो । अब छानिएकामध्ये फिल्मको पात्रअनुसार को सुहाउँछ, उहाँलाई लिन्छौँ ।
मिडियोमा ‘गलबन्दी’ गीतबाट चर्चामा आएकी अञ्जली अधिकारीले खेल्ने सम्भावना धेरै छ भनेर समाचार आइरहेको छ नि ?
फिल्ममा उहाँ नै हुने भन्ने खालको जुन हल्ला छ, त्यस्तो चाहिँ होइन, अञ्जली अधिकारी ‘गीत’ बन्ने सम्भावना बढी छ भन्ने होइन । उहाँको प्रस्तुतीकरण हेरेर पात्र सुहाउँदो लाग्यो र चरित्र पनि मिल्यो भने उहाँ हुन सक्नुहुन्छ । हेर्छौँ ।
मतलब, २० जनामा सबै उत्तिकै दमदार छन् हो ?
हो, सबै उस्तै कुशल छन् । अझै रिजल्ट आइसकेको छैन । तर एउटा दुःखद कुरा के भयो भने केही ब्यानरले छनोट नगर्दै आफ्नो ब्यानरमा अफर गर्नुभएछ । तिमीहरुलाई सीधै फिल्ममा खेलाउँछु, किन अडिसन दिन्छौ भनेर भन्नुभएछ । केही फिल्ममेकरले लालच देखाएर गाह्रो पारिदिएका छन् । ध्यान भड्काउन खोजेका छन् ।
रिजल्ट नआउञ्जेलसम्म ती प्रतियोगीले कुर्छन् त ?
हो, कुर्छन् । ती अनुहारलाई हामीले उत्कृष्ट २५ मा नल्याइदिएको भए कसैले चिन्देनथे । अहिले मेकरले समेत चिन्ने मौका पाए । प्रतियोगीले पनि राम्रो क्रेज देखाएका छन् । अमेरिकाबाट पनि अडिसन दिन आएका छन् । केही प्रतियोगीले युके र अस्ट्रेलियाबाट सीधै आउने भन्नुभएको छ । यसलाई हामीले ‘प्रेम गीत ३’ का क्रेजका रुपमा लिएका छौँ ।
फिल्ममा प्रदीप खड्का नै अभिनेता हुन् नि ? औपचारिक जानकारी त गराउनुभएको छैन त !
हामीले विशेष कार्यक्रम गरेर प्रदीप खड्कालाई इन्ट्री गराउने भनेका थियौँ । तर, सबैलाई थाहा भइसक्यो । हो, प्रदीप खड्कालाई नै प्रेमका रुपमा फिल्ममा लिएका हौँ ।
रिजल्ट आउन ठ्याक्कै कति समय लाग्छ ?
२० देखि २५ दिनसम्म लाग्ला कि !
कथा भन्न मिल्छ ?
यो एउटा ऐतिहासिक फिल्म हो तर वास्तविकता फिल्ममा हुने छैन । बरु फिल्ममा काल्पनिक कथा हुनेछ ।